>Saung Yun La – One Place One Day | MoeMaKa Burmese News & Media
>Htet Htet tries to attack 7Day journalist
>SEA Games result and closing ceremony
>SPDC designates constituencies for election
>the sketch ofariver, The Ayeyarwaddy, Art Exhitition) Prees Show
>Saung Yun La – One Place One Day
ဖြတ်သွားဖြတ်လာ တနေရာရာရဲ့ လမ်းမပေါ်မှာ
နေ့လည် ၁၂ နာရီတိတိ …
နာရီကို အတည်မပြုနိုင်တဲ့ ရာသီဥတုနဲ့
စုတ်ပြဲနေတဲ့ ကမ္ဘာအကွဲကြီးပေါ်မှာ ရပ်ရင်း လျှောက်ရင်း
သတင်း အတင်း အခင်းအကျင်းနဲ့ ပြကွင်းပြကွက်တွေက
အလုံးအရင်း အထွေးလိုက် အပြုံလိုက်
ဆလိုက်ထိုးပြနေတဲ့ ရုပ်ရှင်ပြကွက်တွေလို ….
လိုချင်ရမ္မက် အနံ့အသက်တွေက စားသုံးသူအလိုကျ ….
အကြောင်းရင်းပေါင်းစုံကို တွေးရင်း ငေးရင်း ဆွေးရင်း
ဟစ်ပ်ဟော့ပ်တေးတပုဒ်လို တကျော့ပြီးတကျော့ ထပ်ဆိုရင်း
ခြောက်သွေ့မှုတွေနဲ့ ကောက်ကွေ့ရှည်လျားလှတဲ့ လမ်းမပေါ်မှာ
စိုထိုင်းစေးပျစ် မျက်ရည်မြစ်ကြီး အတားအဆီးမဲ့ စီးဆင်းသွားနေခဲ့ပုံက
နှလုံးရောဂါသည်တယောက်ရဲ့ ရင်ခုန်နှုန်းနဲ့တထေရာတည်း ….
နေလောင် ခြစား ပိုးထိုး လောက်ကိုက်
ဇောက်ထိုးကြည့်မှ အတည့်မြင်နိုင်တဲ့ ခန္ဓာမဲ့စိတ်ပေါင်းသောင်းခြောက်ထောင်ဟာ
ခပ်ပါးပါးခြားထားတဲ့ ရှင်သန်မှုနဲ့သေဆုံးခြင်းကြားက နံရံတချပ်ကို
တနေရာရာမှာ တနေရာစာပျောက်နေခဲ့ပြန်တယ် …
လူသူကင်းမဲ့ တနေရာရာရဲ့ လမ်းမပေါ်မှာ
ညသန်းခေါင် ၁၂ နာရီတိတိ…..။ ။